Khabiirka Kala Duwan: Isbedelada Socda ee Tiknooloojiyada Eye Indhaha
Marka ay ka tarjumeyso taariikhda hore ee indhaha indhaheeda iyo dardargelinta aasaasiga ah,waxay ku soo korodhay warshado farabadan oo taabanaya dad badanbeeraha. Si aad u fahamto waxa raadraaca indhaha waa, dhammaan wixii ku saabsan waa inay ahaataa marka horeqeexay.
Julia Vashneva, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare DijitalAdeegyada, waxay siiyaan aragtiyo isbedelka ugu dambeeyay ee tiknoolajiyada isha lagu hayo ee ku saabsan khibradda iyo waayo-aragnimada ballaaranee wadashaqayn la leh shirkadda CoolTool , shirkadda cilmi-baarista suuqyada
Baaritaanka indhaha waxaa lagu qeexi karaa sida ururinta xogta. Xogta waa la ururiyeyiyada oo loo marayo qalab aan ku-fillaaceyn oo ay ka midka yihiin raadiye indho-furan ama madaxa ah. Theaaladda aan-ku-fillaaweyn waxay isticmaalaysaa kamarad iyo sidoo kale ilaha iftiinka iftiinka. Theilo iftiin ah ayaa loo jeedaa dhinaca indhaha sida rikoodhada kamaradaha iyo diiwaanada qoraalkaTilmaamo (tusaale ahaan, dhexroor ardayda, marxaladaha isbeddelka, dhaqdhaqaaqa wareegsan). Wadar ahaanXogta waxaa loo diyaariyey barnaamijka falanqaynta indhaha ee indha-indheynta iyo natiijooyinka la falanqeeyay
Eye tracking eye ayaa hadda loo istcimaalaa suuq-geynta macaamiisha iyo baakadkacilmi-baaris, cilmi-baaris, caafimaad iyo cilmi-baaris cilmi-nafsiga, iyo sidoo kale bini-aadankacilmi-baaris iyo saadaalinta cayaaraha iyo codsiga. Cilmi baarayaalraadso waddooyin cusub oo codsi loogu talagalay raadinta indhaha, beeruhu si wayn ayuu u fidiyaa.Xitaa millatariga ayaa isticmaalay koofiyadaha raadraaca indhaha indhaha indha indheyntooda(HUDs) si aad uhesho farsamada takhasuska leh
Marka laga hadlayo raadinta indhaha, waxaa muhiim ah in la fahmo afarta aasaasiga ahNoocyada dhaqdhaqaaqa indhaha oo saldhig u ah tiknoolajiyada raadraaca indhaha ee ay ku jiraan:
Saccades..Waxaa loo tixgeliyaa dhaqdhaqaaqyo aad u degdegsan oo isha oo isbeddelayadhibicda xakameynta. Waxay noqon karaan dhaqdhaqaaq yar inta lagu jiro akhriska ama dhaqdhaqaaqyada waaweynmarkaad aragto qolka oo dhan. Guud ahaan, way kufilan yihiin dabeecadda, laakiinwaxaa sidoo kale laga heli karaa ikhtiyaari ahaan. Inta badan dhaqdhaqaaqa indhaha ee kudhaca sacaadiga ayaa dhacaya inta lagu jiroshakhsiga hurdada qofka.
Dhaqdhaqaaqa jilicsan. Aad ayey uga hoosaysaa qaababka kale ee dhaqdhaqaaqa indhaha,Dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa waa dhaqdhaqaaqa ikhtiyaari ah ee dhaqdhaqaaqa fovea (qayb yar oo ka mid ahraajada indhaha ee muuqaalkeedu yahay kan ugu sarreeya). Qofku wuxuu leeyahay ikhtiyaariawood u lahaanshaha in la raaco ama la iska indhatiro xayawaanka. Waxaa jira shaqsiyaad tababarankuwaas oo awood u leh in ay sameeyaan dhaqdhaqaaq dheeri ah iyada oo aan joogin xayiraad (bartilmaameedka)
Dhaqdhaqaaqyada Wareegga. Si ka duwan noocyada kale ee dhaqdhaqaaqa indhaha, halka labada indhoodba ay u guuraanisla jihada, dhaqdhaqaaqa xayawaanku waa kala gooyaan. Khadadka aragtida mid kastaindhuhu wuxuu arki karaa shay ku dhow ama meel fog. ArdaydaDhaqdhaqaaqa wuxuu kor u qaadaa garashada dareenka, wuxuuna naqshadeeyaa muuqaalka fawka (retina).
Dhaqdhaqaaqa Vestibulo. Ku dhaqmidda dhaqdhaqaaqa madaxa, vestibulo-oculardhaqdhaqaaqa indhaha waxay kaa caawinayaan sidii loo xasilin lahaa sawirrada muuqaalka ah ee dareenka dibadda. Dareemahadusha sare wuxuu magdhowaa sawirka "boodboodka" isagoo ogaaday isbeddelada socda (dhaqdhaqaaqa madaxa)sidaas darteed waa in lagu hagaajiyaa dhaqdhaqaaqa saxda ah ee isha. Isbedelka magdhowgu waasi tartiib tartiib ah, sababtoo ah dhaqdhaqaaqa madaxa iyo sidoo kale jawaabo dareen ah
Cidduu Diido Eye Tracking
Maalin kasta, codsiyada indhaha indhaha ayaa lagu isticmaalaaSiyaabo cusub oo hal abuur leh. Marka qofku ka fikiro inta qofku u isticmaalo indhaha maalin kasta, wax yaab leh maahanmacluumaadka ay ururiso waa mid wax ku ool ah oo ku saabsan suuq kasta. Mid ka mid ah warshadaha noocaas ah waa cilmi-baaris suuqa.Macluumaadka laga soo ururiyay baadhitaanka raadraaca indhaha ayaa loo isticmaalay naqshadeynta baakidhka iyo sidoo kale xayaysiinta.
Isboortiga Xirfadleyaashu waxay isticmaalayeen tiknoolajiyada raadraaca indhaha si ay u hagaajiyaanwaxqabadka cayaaraha ee isku dhafka ah ee isku dhafanaanta farsamada, dabiiciga iyo dabeecadamacluumaadka si ay u siiyaan qalab cabbir ah shakhsi ahaan horumarinta. Xirfadaha habdhaqanka iyo dareemayaasha dareemayaasha ayaa isticmaalayay tiknoolajiyada raadraaca indhahaee xirfadaha akhrinta qaymaynta, dysleksi, shaqada mashiinka, iyo sidoo kale maqalkaiyo sawirka sawirka. By isticmaalka kicinta muuqaalka screen-ku salaysan iyo dhaqdhaqaaqa madaxaqalabyada raadraaca bilaashka ah, cilmi-baarayaashu waxay heleen habab cusub oo lagu cabbiro oo lagu qiimeeyomaqnaanshaha shaqada mashiinka iyo sidoo kale isticmaalka hababka taabashada si loo saxo cilladaha shakhsi ahaaneed
Aagga cusub ee indhaha indhaha waa cilmi baaris ku salaysan. Cilmi-baarayaashu way kobcayaanqalabyada ugu dambeyntii badali kara isdhexgalka dadka iyo kombiyuutarka. Thecilmi baarisu waxay diiradda saaraysaa isticmaalka indhaha si loo xakameeyo korsada kumbuyuutarka..Bedelkiiadigoo isticmaalaya jiir, farxad sare ama kiniin qoraal ah, user ayaa xakameyn doona ficilada kombiyuutarkaiyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa indhaha iyo iftiinka
Si joogta ah sida indhaha raadraaca u shaqeynaya qofka fayow caam ah ayaa lagu sharxi karaaereyo aan-sidaas-fudud. Eye tracking tan iyo bilowgii loo isticmaalay in lagu cabbiroiyo in la qiimeeyo fekerka muuqaalkiisa. Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu qiyaaso sida dareenka, laakiin kuwa ugu caansan waa hab aan haboonayn
La socoshada indho-indho-indho-dheereyn
Fikradaha asaasiga ah ee indha-indheynta indha-la'aanta ah waa xarunta dhexe ee ardaygafekerka (PCCR). Fikradani waxay isticmaashaa ilo iftiin leh oo iftiin lehindhaha, taas oo internsheed sababa muuqaal iyo u ogolaato nidaamka duubista cameraqaadashada xogta sawirada. Sawirka lagu qabtay qalabka duubista (kamarad) ayaa tilmaamayafikrado kala duwan oo ka dhexeeya aragtida ardayga iyo guusha. Marka macluumaadkawaxaa la qabsadaa miisaanka loo yaqaan 'angle vector table' loo adeegsado si loo sameeyo joometeri gaar ahsifooyinka muuqda kuwaas oo sal u ah jihada sawirada
Iyada oo ku xiran adeegsiga sawir-muuqaalka isha loo isticmaalo, xisaabinta jihada ee muuqaalkawuxuu u ogolaanayaa algorithms-farsamooyinka kala duwan ee muuqaalka iyo sidoo kale qaababka 3D ee ishamarka la eego dhinaca aragtida. Marka la eego ereyada fudud, diiwaanka nidaamkadhaqdhaqaaqa indhaha, qiimeeyaan mabaadiida aasaasiga ah ee isha, waxay diiradda saareysaa dhibicdaee xuduudaha la eego, waxayna sameeyaan xog ururin ah marka la falanqeynayodhamaystirka macmiilka dhammeystiran iyo natiijooyinka. Natiijooyinka waxay cabbiri karaanwax kasta waxay sameeyaan dareenka qofka shaqaalaha ah, si loo helo qalab gaar ah. KuSharaxaad dheeri ah, tusaale u ah geeddi-socodku waa sida soo socota:
Cilmi-baadhaha raadraaca isha ayaa doonaya inuu aqoonsado sawirro gaar ah kumbuyuutar(tusaale ahaan, badeecada la iibsado). Waxaa jira muuqaalo isku mid ah oo ku saabsan badeecada ashaashadda kombiyuutarka leh kala duwanaansho kala duwan (midabka, cabbirka, iwm.) Cilmi-baarahawuxuu jecel yahay inuu ogaado midka sawirada isticmaalaha kumbiyuutarka diiradda saaraya (taasoo ku jirtajaangooyuhu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu tilmaamo sawirka wax soo saarku uu ku faraxsan yahayu-isticmaalaha). Nidaamka nidaamka tracker indhaha waxaa ka mid ah nidaamka maqalka,Mashruuca iyo waxqabadyo isku dhafan oo taxane ah. Ugu horreyntii, mashruuca ayaa abuurayamuuqaalka iftiinka casriga ee indhaha. Marka xigta, nidaamka qorista sawir qaadista ayaa qaadatasawirro badan oo qaab-sare ah-qaab-muuqaal ah ee muuqaalka indhaha ee userka (tusaale ahaan, midkeesawirrada shaashadda ee isticmaaluhu isticmaalayo).
Qalabka wax soo saarka sawirada (gaar ahaan, indha indheynta indhoolayaasha gaarka ahsi ay u socdaan sawirada) waxay tilmaamayaan faahfaahin gaar ah ee indhaha qofka iyo muuqaalkiisanaqshadaha. Ugu dambeyntii, ku salaysan sawirada sawirada la soo ururiyey waa softwarewuxuu xisaabiyaa indhaha 'indhaha iyo dhibcaha'. Xogtan ayaa markaa la tarjumayaasida mid ka mid ah sawirrada shaashadda kombiyuutarka user ayaa diiradda saaraydareenka saaran (sidaas darteed cilmi-baaruhu wuxuu tilmaami karaa waxyaabaha ka mid ah waxyaabaha la iibsadokoox gaar ah oo udub dhexaad ah ayaa diiradda saaray).
Sida bii'ada tiknoolajiyada raadraaca indhaha waxay ku fidisaa meelo kala duwan, su'aaluhuna waxay yimaadaansida wax-qabadka iyo sidoo kale dareenka helitaanka xog sax ah. Ku saabsan sidawelwelku waa in iftiimidu ay saameyneyso natiijooyinka raadraaca indhaha..Sida uu u iftiimayo qofIndhaha waa tallaabo aan qasab ahayn, guud ahaan looma kantarooli karo. Iyadoo laga hadlayoindhaha indhaheeda, ileyska ayaa u muuqda in uu xoqo indhaha iyo indhuhu marka eyda indhihiisaxiro. Macluumaadka sawir-celinta kobcintu waxay lagama maarmaan u tahay isha xogta raadraaca indhaha,inta lagu jiro falanqaynta natiijooyinka kama dambaysta ah dhibcooyinka xogta maqan ayaa lagu daraymidkoodna soo saarida buuga ama soo saarida isdaba-marinta ee software indho-indheynta indhaha.Inkastoo xogta laga soo saarayo laga yaabo inaanay noqon 100% waxay ku dhowdahay inay soo qaadato gabagabada xogta saxda ah.
Su'aal kale ayaa soo baxaya sida haddii dhaqdhaqaaqa madaxa uu saameeyo raadinta indhahanatiijooyinka? Dhaqdhaqaaqa madaxa inta uu socdo socodka indhaha indhaha waa arrin taas oowaxay natiijada ka dhigi karaan natiijada maxaa yeelay waxay yeelan kartaa saameyn cad oo ku saabsan saxnaanta aragtidaxogta. Marka lagu xalinayo dhibaatada dhaqdhaqaaqa madaxa, dareemayaal badan oo indhaha iyokamaradaha xog ururinta ayaa lagu geynayaa bartamaha dadweynahaaragtida si loo abuuro nooca "processing data stereo" oo kor u kacakala duwanaanta aragtida. Markale mar kale, badanaa u egyahay ileyska, ishabarnaamijka raadraaca ayaa soo saari doona qorshe kaas oo tixgelin doonadhaqdhaqaaqa vestibulo-madaxa (madaxa) iyo hagaajinta xogta tarjumaadda kama dambaysta ah.Maxaa looma xisaabin karo natiijooyinka kama dambaysta ah waa haddii qofka isticmaala indhahawaxay u jeedaan madaxooda dhinaca, dhaqdhaqaaq dhaqso ah oo dhaqso ahwuxuu ka baxsan yahay qiyaasaha dareemayaasha indhaha iyo kamaradaha.
Markaad ka falanqeyneyso tiknoolajiyada raadraaca indhaha indhaha su'aalaha marwalba u muuqdaKicin waa saxnimada iyo saxda qalabka raadraaca indhaha (opticaldareemayaasha, kamaradaha, iwm.) iyo sidoo kale falanqaynta xogta (software) falanqaynta.Walaacyadaas waxaa lagu xalin jiray shirkado kala duwan oo indho indhaynayakuwaas oo sameeyay heerar cabbir ah si loo xaqiijiyo saxnaanta ugu fiicansuurtagal ah. Qaabka Heerka Xaqiijinta Isku-xidhka ayaa si isdaba-joog ah u tijaabiya ishasi loo ogaado saxnaanta waxqabadka indhaha shaqsi. Sida ka soo horjeedaimtixaannada Binocular Accuracy oo isla markiiba tijaabiya indhaha (badanaa)loo tixgeliyey saamiga caadada).
Mustaqbalka Eye Tracking
Qeexida Xaqiijinta Motivational waxay tixgelinaysaa xaalad imtixaan oo ku haboonsida aasaas si loo cabbiro dhamaan natiijooyinka saxda ee kale. Xaqiijinta xad dhaafka ahxaglaha xaglaha ah waxay tijaabiyaan xaglaha iftiimiya taas oo ah qaybta ugu weynraadinta indhaha. Xaqiijinta iftiiminta is-beddelidda waa tijaabo ka faa'iideysata afarshuruudaha is-beddelka oo ay ka mid yihiin dib-u-dhiska iyo jihada hore(faragelin). Xaqiijinta jagooyinka madaxa ee isbedelka kaas oo tixgelinayadhaqdhaqaaqa madaxa inta lagu jiro nidaamka raadinta indhaha. Mid kasta oo ka mid ah shakhsiyaadkaheerarka tijaabada ah ee la xiriira qalabaynta qalabka ayaa la qabtaasi loo ilaaliyo natiijooyinka ugu muhiimsan ee indhaha indhaha.
Weli waxaa jira kuwa dhaleeceynaya kuwaas oo ka walwalsan in indhaha indhuhu ay tahay kaliyatiknoolijiyada casriga ah. Dhaleeceyntu waxay kordhiyeen cabsida in tiknoolijiyada ay awoodaanwaa in si khaldan loo adeegsadaa / ama natiijooyinka imtixaanka aan la faquuqin. Sida tiknoolijiyadawaxay noqotay mid aad u sarreeya oo natiijooyin badan oo la qeexay,Dhaleeceyntu waxay u egtahay inay yar tahay iyo inta u dhaxeysa. Tiknoolajiyada raadraaca indhaha ayaa ahaaloo isticmaalo si loo ogaado dhaawacyada maskaxda iyo maskaxda, waxbarashada waxbarashada kuwa lehakhrinta naafada iyo inta badan meelaha la maleyn karo
Mustaqbalka tiknoolajiyada raadraaca indhaha ayaa u muuqda in ay halkan joogaan..Calaamadtiknoolajiyada raadinta indhaha ee indhaha ayaa durbadiiba bilowday. Shirkadda Samsungayaa soo bandhigay khadadka telefoonada gacanta kaas oo joojin doona fiidiyow horay ujeedamarka uu isticmaluhu isticmaalo. Samsung iyo shirkadaha kale ee telefoonada gacantasoo bandhigida taleefannada aqoonsiga biometriga ee biometric kaas oo furi doonaisticmalaha shaashadda telefoonka gacanta
Warshadaha baabuurta ayaa isha ku hayaraadinta nidaamyada feejignaanta feejignaanta oo ogaan kara marka darawalku uu hurdeysanayosidaas darteed hoos u dhigista shilalka. Sidaa awgeed, baabuurta mustaqbalka waxaa laga yaabaa in lagu qalabeeyo indhoQalabka korjoogteynta qaababka oo wax ka beddeli kara nidaamyada wadista iyadoo la fiirinayodarawalka iyo bey'adda ku hareereysan (rinjiga roobka qoyan, xaaladaha barafka, iwm.).Tiknoolajiyada raadraaca indhaha ayaa lagu soo bandhigay adduunyadda ciyaaraha runta ah.Nidaamyada VR waxay u isticmaalaan tiknoolajiyadaan si ay ugala sheekeystaan ​​walxaha dhaqdhaqaaqa indhaha.Meelaha daaweynta, dabiicada ayaa loo sameeyay indho-indheyn ayaa u oggolaan doontawaxay ogaadaan calaamadaha ugu horreeya ee istaroogga ama suuxdinta
Waxaa jira caqabado badan oo ku taagan jidka tiknoolajiyada indhahamaadaama ay u guurto nolol caadi ah ee nolosha. Aqoonsiga raadraaca indhahaSoftware-ka weli waa in ay ka duwan yihiin isha fududdhaqdhaqaaqa. Fikradaha kale ee la xalinayoay ku jiraan kala duwanaanshaha aragga, cadaadiska indhaha iyo dhacdooyinka mashquul. Sida ishaqalabka kormeerka dabagalka ayaa ka faa'iideysta shuclada casriga ahindhaha, ma jirin daraasado ku filan oo ku saabsan waxyeellada waxyeelada leh ee soo noqnoqodka dheer ama soo noqnoqda
Tusaale ahaan, waxaan ku jirnaa Adeegga Dijitaalka ah ee Digital si toos ah ula shaqeynaya shirkadda cilmibaarista suuqa CoolTool , oo bixisa isha oo dhammeystirantiknoolijiyada la socoshada iyo farsamooyinka raadraaca macaamiisha kaleee cilmi-baarista suuq-geynta culus. Xaqiiqdii, shirkaddani waxay leedahay adhalashada jiilka fiican iyo baahida aadka u weyn iyada oo ay ugu wacan tahay xiisahaee dhagaystayaasha tiknoolajiyada. Runtii, raadinta indhaha ayaa kuu ogolaanaysasi aad u hubisid dareen-celin khaas ah dhinacyada suuq-geyntaada,taas oo ka duwan kala duwanaanshaha baaritaanka macaamiisha. Waxay keentaa aNooc weyn oo tiknoolajiyada raadraaca indhaha ee suuqa suuq geyntaiyo isbedelkani wuxuu sii kordhayaa
Gebogebo, tiknoolajiyada raadraaca indhahahalkan ayuu joogayaa. Tiknoolajiyada waxaa lagu dhex darayaa nolol maalmeedkeenna si ay u aqbalaanwaxay u egtahay inay tahay mid baahsan. Sida ugu dhakhsaha badan horumarinta iyo hagaajinta ayaa ka dhacaya, raadinta indhahawuxuu sii wadi doonaa inuu kor u qaado isticmaalka tiknoolajiyada loogu talagalay qalabaynta aaladaha caadiga ah iyoogaanshaha caafimaadka iyo / ama nafsiyaadka maskaxda (oo ah bilowgii kaliya)mustaqbalka tignoolajiyada raadraaca indhaha maaha mid ku kooban fikradda shakhsiyadeed ee ra'yiga,codsigeeda wax ku oolka ah ee nolosheena waa mid aan xad lahayn Source .